नेपाल हार नजिक पुग्दा वर्षाले खेल रोकियो, अब के हुन्छ ? – WicketNepal
नेपाल र अफगानिस्तान बीच यु-१९ युथ एसिया कपको सेमीफाइनल खेलमा अफगानिस्तान जितको नजिक पुग्दा वर्षाले खेल रोकिएको छ।
नेपालले टस हारेर पहिले ब्याटिंग गर्दै दिएको १०४ रनको लक्ष पछ्याउने क्रममा अफगानिस्तानले १८ ओभरको खेल सकिंदा १ विकेट गुमाएर ९४ रन बनाएको अवस्थामा भारि वर्षाले खेल रोकिएको थियो।
अफगानिस्तानलाई जितको लागि मात्री १० रन आवस्यकता भएको बेला पानि परेको हो। हेर्नुस स्कोरकार्ड
वर्षा पछि दुवै टिम लन्च गरिरहेको छ। किनरारा मैदानमा पुनः घाम लागेकोले खेल सुरु हुने अवस्था रहेको छ।
नरोकिए अब के हुन्छ ?
५० ओभरको खेलमा डक बर्थ लुइस ( डी/एल ) मेथडबाट बिजेता घोषणा गर्न कम्तिमा २० ओभरको खेल भएको हुनुपर्छ। तसर्थ यदी खेल यो अवस्थामै रोकिए डी/एल मेथडबाट बिजेता घोषणा गर्न मिल्दैन ।
तर एसियन क्रिकेट काउन्सिलको प्लेइंग कन्डिसन अनुसार खेल रोकिएको खण्डमा समुह चरणको प्रदर्शनको आधारमा निर्णय लिईनेछ। यो अर्थमा अफगानिस्तान समुह ‘बि’ को बिजेताको रुपमा सेमीफाइनलमा स्थान बनाएकोले अफगानिस्तानलाई बिजेता घोषणा गरिनेछ र फाइनल पुग्नेछ।
समुह चरणको खेल समाप्तिमा अफगानिस्तान समुह ‘बि’ को बिजेता तथा नेपाल समुह ‘ए’ बाट उपविजेताको रुपमा सेमीफाइनल प्रवेश गरेको थियो।
समुह चरणमा अफगानिस्तानले २ जित र १ हार बेहोरेपनि नेट रनरेटको आधारमा पाकिस्तान र श्रीलंकालाई पछि पार्दै समुह बिजेता बनेको थियो।
सेमीफाइनल खेलमा नेपालले पहिलो इनिंगमा खराब ब्याटिंग प्रदर्शन गरेपछि १०४ रनको लक्ष अफगानिस्तानले सहजै पछ्याईरहेको थियो।
ओपनिंग ब्याट्सम्यान रहमतुल्लाह गुर्बजले अविजित ६९ रन बनाएर तथा इक्रम अलि १८ रन बनाएर ब्याटिंग गरिरहेका थिए। गुर्बजले ६२ बलमा ९ चौका र २ छक्का प्रहार गरिसकेका छन् ।
नेपालको लागि एक मात्र विकेट कमल सिंह ऐरीले छैठौं ओभरमा इब्राहिम जद्रानलाई कट बिहाइन्ड गराएका थिए। सन्दिप लामिछाने, दिपेन्द्र ऐरी र शाहब आलम भने विकेट बिहिन रहेका छन्।